Dugsiyada - Robbinsdale Area Schools
Dugsiyada Aagga Robbinsdale waxay u adeegaan ku dhowaad 12,000 arday oo ku nool toddobo beel oo ku yaal waqooyiga-galbeed magaalooyinka Mataanaha, oo ay ku jiraan Brooklyn Center, Brooklyn Park, Crystal, Golden Valley, New Hope, Plymouth iyo Robbinsdale.
Degmadeennu waxay leedahay 11 dugsi hoose, afar dugsi dhexe, laba dugsi sare, dugsi sare oo beddel ah iyo barnaamij wax ku ool ah oo loogu talagalay Waxbarashada Bulshada oo u adeegta bartayaasha da 'kasta.
Barnaamijkeena Laba-Wajiga ah ee Isbaanishka Labada-af wuxuu u furan yahay ardayda dhigata Dugsiga Hoose ee Northport. Barnaamijkan, ardayda ka soo kala jeeda luqado kala duwan ayaa wax ku wada barta halka tacliinta si nidaamsan loogu bixiyo laba luqadood. Ardaydu waxay akhriyaan, qoraan, dhagaystaan oo ku hadlaan labada luuqadood iyagoo noqonaya laba-luqadood, aqoon-yaqaan iyo laba-dhaqameed iyagoo ka shaqeynaya xagga hanashada heerka tacliimeed ee heerka fasalka. Labada luuqad waxay ardayda siisaa fursad ay kudarsadaan luuqad kale inta ay kujiraan da'da ugufiican ee barashada luuqada.
FAIR (Farshaxanka Farshaxanka Farshaxanka ah) Dugsiga Crystal waa iskuul magnet farshaxan oo u adeega ardayda dhigata fasalada 5-8 (FAIR Pilgrim Lane wuxuu u adeegaa ardayda fasalada K-4). Sida iskuulka bakhtiyaa-nasiibka dadweynaha, qoysaska ku nool gudaha iyo dibedda degmada 281 ayaa codsan kara inay ku soo biiraan barnaamijkeenna.
Hadafka Dugsiga Sare ee Armstrong (AHS) waa inuu dhiirigaliyo oo wax baro dhammaan ardayda si ay u ogaadaan kartidooda oo ay si togan ugu biiriyaan bulshadooda. Ardaydu waxay helaan waxbarasho adag oo sifiican loo soo koobay oo ku saleysan noocyo kala duwan oo manhajyo kala duwan ah iyo fursado kobcin. Waxaan ku bixinaa manhaj adag oo ku mashquulsan dhammaan qaybaha, dhammaan ardayda iyo heerarka kartida. Waxaan dhiirrigelinnaa jawi waxbarasho oo tayo leh, waxaan kobcineynaa horumarka aqooneed, waxaan dhiirrigelinnaa xiriir wanaagsan oo dhexmara ardaydeena waxaanna u diyaarinnaa ardayda masuuliyadaha nolol wax soo saar leh.
Barnaamijka Meelaynta Horukacsan (AP) ee Armstrong waa mid ka mid ah barnaamijyada AP ee ugu waaweyn gobolka Minnesota, oo bixiya koorsooyinka AP ee Ingiriisiga, cilmiga bulshada, sayniska, xisaabta, luqadda adduunka, farshaxanka iyo muusigga. AP waa barnaamij iskaa wax u qabso ah oo ardayda siiya fursad ay ku qaataan hal ama in kabadan koorsooyin heer jaamacadeed ah iyagoo wali kujira dugsiga sare.
AHS waxay leedahay in kabadan 75 kooxo iskuulku kafaalo qaaday, naadiyo, bandhig faneedyo iyo nashaadaad faneed iyo isboorti.
Himilada Dugsiga Sare ee Cooper (CHS) waa in la helo daryeel iyo firfircoon bulsho halkaas oo dhammaan xubnayaasha lagu ixtiraamo, iyo in ardaydu noqdaan fir fircoonaan, naxariis leh, mabda 'mabda' leh.
CHS waxay ardayda ku diyaarisaa barnaamijka International Baccalaureate Sannadaha Dhexe (IBMYP), horumarka Via Individual Determination (AVID) iyo barnaamijka IB Diploma ee mas'uuliyadda muwaadinnimo ee bulshada adduunka.
IBMYP waxay ardayda siisaa aasaas ballaadhan oo aqoon ah, aragti caalami ah iyo nidaam sare oo xirfadaha fikirka muhiimka ah. Waa iskuul dhammaan ardayda fasalada 9aad iyo 10aad, oo leh qayb maamuus u leh ardayda danaynaysa. Barnaamijku wuxuu ku dhammaanayaa Mashruuca Shakhsiyeed ee fasalka 10aad.
AVID waa koorso la xushay oo loogu diyaar garoobayo kuliyada oo loogu talagalay in lagu caawiyo ardayda tacliinta u hanqal taagta — khaasatan kuwa noqon doona kuwa ugu horeeya qoyskooda ee taga koleejka — u diyaar garowga iyo ku guuleysiga kuleejka. AVID waxay taageertaa habab ku saleysan cilmi baaris waxbaris iyo dhiirigelin si loogu guuleysto. Macallimiintu waxay adeegsadaan xeeladaha AVID ee dhismaha oo dhan.
CHS waxay bixisaa nashaadaadyo manhajyo dheeri ah iyo noocyo badan oo isboorti ah.
Akadeemiyada Robbinsdale - Highview waxay siisaa manhaj buuxa ardayda da'doodu tahay 14-21 sano (fasalada 9 ilaa 12). Waxaan u leenahay jawi shaqsiyeed u gaar ah, shakhsi ahaaneed ardayda doorbidaysa goob yar. Macallimiinteena iyo shaqaalaheennu waxay siiyaan shaqsi shaqsiyeed, isxilqaan leh rajooyin ku wajahan heerarka kartida iyo fursadaha guusha iyadoo loo marayo dabacsanaan iyo xulashooyin.
Waxaan u heellan nahay inaan ardayda oo dhan siinno jawi aamin ah, xushmad leh, taageero leh oo arday walba fursad u leeyahay inuu ku horumariyo kuna dabaqo xirfadaha tacliimeed, shaqsiyeed iyo xirfadeed.
Robbinsdale Virtual Academy (RVA) ayaa ikhtiyaar u ah ardayda dhigata fasalka 9aad iyo 10aad (haddii ardayda dhigata fasalada 11aad iyo 12aad ay xiiseynayaan, fadlan soo wac 763-504-8700). RVA waxay bixisaa manhaj si toos ah loo aqoonsan yahay oo internetka ah, oo leh koorsooyin loo sameeyay in lagu baro internetka. Ardaydu kuma kulmaan fasalka jir ahaaneed waqti cayiman, waxayna ardayda siinayaan dabacsanaan ay ku qaabeeyaan khibradooda dugsiga sare.
Waxbadan oo kusaabsan Akadeemiyada Virtual Robbinsdale (RVA):
Koorsooyinka onlaynka ah waxay bixiyaan isla caqabad qaab kale ah. Waqtiga iyo shaqada waxay la mid noqon doonaan koorsooyin dhaqameed, qof ahaan ah. Ardaydu waxay wax ku bartaan qaab loo isticmaalo kulleejooyinka iyo goobaha shaqada. Koorsooyinka waxaa ka mid ah:
Fiidiyowyo, aqrin, laylisyo, su'aalo iyo imtixaano ku saabsan Schoology
Wadahadalka iyo mashaariicda internetka
Milicsiga toddobaadlaha ah iyo dejinta yoolalka
Helitaanka maalinlaha ah ee macallimiinta ruqsadda haysta si looga caawiyo shaqooyinka
In kabadan 20 koorso ayaa loo heli karaa deyrta 2020
Ardayda iskaashiga la leh dadka kale waxay helaan faham qoto dheer oo ku saabsan fikradaha waxayna xafidaan macluumaadka. Wadashaqeyn xushmad leh oo lala yeesho asxaabta iyo macallimiinta ayaa aasaas u ah dhammaan koorsooyinka RVA. Wadahadalka khadka tooska ah iyo meeleynta kooxeed waxay ardayda siisaa fursado ay kuwada shaqeeyaan.
Qeyb weyn oo ka mid ah RVA waa milicsiga iyo dejinta yoolka. Ardayda dejiya yoolalka oo ka tarjumaya waxbarashadooda waxay ku guuleystaan iskuulka iyo wixii ka dambeeya. Koorsooyinka RVA waxay ardayda siiyaan fursado badan oo ay ku horumariyaan astaamahan waxbarasho ee muhiimka ah. Toddobaad kasta, ardayda waxay qiimeeyaan horumarkooda usbuucii hore. Waxay wax ka qoraan guusha iyo caqabadaha waxayna dejiyaan yoolalka usbuuca soo socda.
Wadahadalka ay shaqaaluhu bilaabeen wuxuu ugu yaraan usbuuc walba la qaataa dhamaan ardayda, wuxuuna diirada saaraa horumarka koorsada (natiijooyinka qiimeynta dhawaanta iyo guud ahaan fasalada koorsada) iyo milicsiga todobaadlaha ah ee arday walba iyo dejinta hadafka. Xiriirintani waxay dib u eegi doontaa shaqooyinka koorsada ee arday walba ee khadka tooska ah iyadoo loo eegayo qorshahooda guud ee qalin-jabinta. Markay ardaydu bilaabaan xiriirinta (emaylka, farriinta LMS, wicitaan taleefan), macallimiinta iyo shaqaalaha taageerada waxay ku jawaabi doonaan 24 saacadood (maalmaha shaqada oo keliya) marka laga reebo kuwa dhif ah.